Amanqaku kaGal Glikman kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UGal Glikman
Omnye wemiceli mngeni omkhulu kubapapashi nakowuphi na umthengisi namhlanje ziibhlokhi zentengiso. Kubathengisi, ukunyuka kwamaxabiso okuvimba kubangela ukungakwazi ukufikelela kubaphulaphuli abathandiweyo. Ukongeza, amaqondo aphezulu okuvimba intengiso akhokelela kuluhlu oluncinci lweentengiso, olunokuthi ekugqibeleni lonyuse amaxabiso e-CPM. Ukusukela oko iibhlokhi zentengiso zadlala ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, amaxabiso okuthintela inyuko anyukile, afumana izigidi zabasebenzisi kwaye asasazeka kuwo onke amaqonga. Esinye seziphumo zakutsha nje